FX-Consultant – Sei mugotenga Financial Markets
1. A nzira mugotenga mari Markets
2. kusimbisa muviri: sei Kuti Your nokurova kuchinja First
3. Chii Multiplier?
4. Chii kuti Tora Profit?
5. Chii Stop Loss?
6. Essential Kukoshesa akatsanangura (zvakaoma Oil)
7. Essential ongororo rinotsanangurwa (apuro)
8. Technical ongororo: ziviso
9. 3 Golden nhungamiro pamusoro vachitenga uye kutengesa
10. Sei nyanzvi vatengesi Ko Shandisa Libertex Mobile?
Vanhu vazhinji ngatiti unofanira kuva nyanzvi mari nhaka kana nembiri miriyoni imwe Alternate mukati zvoupfumi pamusika, zvisinei, kuti chaizvoizvo asina zvechokwadi.
Mirwi vanhu kuchinjanisa wokumwe mari zuva nezuva asi kunonyanyisa regai funga zvavari chaizvoizvo kuita.
Ndine chokwadi iwe vakachinjanisa Forex yapfuura pane kuenda zororo, zvichida uri yendege Via imwe mari wokutengesera dumba. ungadai kusvitsa zvimwe mari mune imwe Forex uye vawana mari mune dzimwe. Chii makagamuchira shure achinja yakasimbiswa kutendeuka mutengo panguva.
Ngatimbo fanoona kuti panguva iyoyo sezvo imi makanga pazororo, pane kwave nhau kuti kwemabasa kubhadhara mukati US akanga akadonha uye United States greenback mutariri akanga kane shanu%. apo iwe akadzoka zvemumba, iwe achinja America madhora repasi shure kune dzimwe mari yako pedyo uye akacherechedza kuti iwe wakaita 5% mari yaunowana.
Chii akapfuura kure? In nyore nemashoko iwe wakaita zvakaenda: chinonyanya paunenge wakatenga US greenbacks, wechipiri kana iwe vakazvitengesa uye akaita 5% batsiro.
Nyanzvi vatengi kuti akafanana zvakaenda, asi, kupfuura nokutora mudunhu yokumwe mukutsinhana rokutengesa nzvimbo pamusoro yendege, vanotora nzvimbo kuburikidza nyore kushandisa paIndaneti Libertex papuratifomu, avo mafoni, capsules uye kombiyuta yacho. vanoita anowedzera kuziva nzira kutarisira mutengo unotii, munzira kuwana mari pazvitendero dzose.
Ngationei pamwe chete sei unogona kuwana nokushandisa vachitenga uye vachitengesamo misika yemari.
All ungafanira muri mins shanu nokunonoka, mumwe Demo nhoroondo $5,000, uye maviri maviri vatorwa mari, EUR / USD uye USD / CHF.
maviri aya kuti mienzaniso yakakodzera sezvo zvavo humwewo prices siyana zvikuru kakawanda, uye iwe unogona kuita purofiti kubva kwavari chete 5 kuti 30 maminitsi. Waisazoda amirire kudzokera kubva karwendo.
achibvumira kuti Get akatanga!
1. Sarudza EUR / USD kubva kunobatsira mazita uye akavhura kutenga chinjana. tendera kuti mari $500 aine rimwe multiplier zana ive Somuenzaniso.
2. Zarura mumwe kutengeserana USD / CHF sezvo chinokosha, shandisa kufanana multiplier uye fanana inivhesitimendi uwandu.
For ose Exchange, ari broking kuda kubhadhara mhosva duku (mukati wakaenzana nzira kuti chevanorwara zvemari kuti mutengo muripo kuti Forex). Unogona kuona mutengo uyu Exchange hwindo. asi vakasiyana kupfungwa zvemari, munyengeri makomisheni vari mijenya kuderera.
3. Rekukwazisa zvose zvakaenda anosvinurira, vanotarisira maminitsi mashanu kunyange sevakatarira vako zvakaenda 'magumo mugumisiro.
china. Nepo wokutanga shanduko purofiti akapfuudza wechipiri chete kutengeserana Nokurasikirwa, kana mumwe zvakaenda vari mari, kuvhara zvose kukiya nokuda kwako mari.
Kana makashamisa zvose zvakaenda sematsananguriro pano zvakanaka uye zvakadaro havagoni kuona chero zvakaoma, usanetseke. Kana pamusika akadzikama, hamungambovi kuona chinjana, saka ibvai izvozvo kuvhura imwe nguva.
Nezvedu, USD / CHF mari akapfuudza EUR / USD kurasikirwa. bvumira pedyo vose zvakaenda kuzochera mari pamusoro nhoroondo.
Takaona chete atambira mari iri USD / CHF mune chete mamwe maminitsi, uye kwete kushandisa kunyatsoongorora chero nzira.
A Multiplier imwe inokosha giya mu Libertex. Rwunoita mamuri kuti kukura kwako mukutsinhana kuti mubereko vanokwanisa.
Sei izvozvo mifananidzo? Zviri nyore.
Chirega kuti kutarisira ukatenga EUR / USD, wako inivhesitimendi uwandu iri $50, uye multiplier rako chete. Kana mutariri vanokwira 10%, mari yaunowana chingava $ shanu ($50 X 10%).
Asi kana kusiyana chete iwe tsanangurai 20 somunhu multiplier wako mari mari achamuka $1,000 ($50× 20).
Sezvo unogona kuona, zvakaoma yenyu yave akakwidziridzwa kuburikidza 20, uye kuti ndiko kuti multiplier mabasa.
Ndizvo kufanana velocity ane motokari: zvikuru zviri kure, asi nokukurumidza kuti usvike kwauri kuenda. zvisinei, yakakwirira tifambirane kunounza mukuru mukana. Ndokusaka mumwe chinangwa motokari simba anosarudza uchizvipa zvakanaka pachavo zvichienderana vanotozvifarira yavo, mumugwagwa uriri ezvinhu uye nzvimbo vaenzi bumbiro.
For ruzivo vatengesi, tinoratidza mashandisirwo ari usingashandi multiplier, izvo zvinotipa 1, izvo tichadzivisa ngozi kana pamusika zviito kwamuri.
Paunenge akatenga nezvaanogona uye ruzivo, unogona kuwedzera multiplier yako.
Tora mari ndiwo dzakamirira kuti yaibva dzevhudzi-ari munyengeri kuti purofiti.
apo kushandisa Wana zvakaoma:
• anoita funga unofanira kuenda basa uvhure kuti maawa mashoma uye haagoni ichi- vachiongorora mhosva sangano. In izvi, iwe zvirokwazvo nzvimbo imwe Wana mari kuitira zororo chivimbo vachigere iwe vasataure kuchengeta kufirimu.
• Rega kutenda kuti panguva iyoyo sezvo uri kuona firimu racho kunobatsira kuti muripo inofamba nenzira yakanaka nenzira. A Tora zvakaoma kuti yaiva ambotaurwa zvichaita kiya-iri nani Via mechanically kuramba kwako basa, kamwe chete kunobatsira zvasvika mhosva akanaka, saka waita zvakaoma kunyange sezvo imi kungwarira firimu yako.
pano ndiyo chiitiko sei kuti nzvimbo ine Wana purofiti hurongwa:
• Iwe akavhura EUR / USD Utenge chinja pa 1.0620
• Iwe chengeta $500 aine multiplier pamusoro 100
• tarisa chati nokuda kunobatsira kuti mwero zvikuru ano yepamusorosoro. Nezvedu, zviri 1.0745.
• Tora Mibayiro Yako kuti vanofanira akaiswa chete pasi kunonyanyisa mwero, panenge 1.0725
• Kuti vanoisa Wana zvakaoma kuti mazwi aya, tanga wavhura basa pamwe kunobatsira uye ipapo kuenda zvakaenda My
• Sarudza kubva EUR / USD Exchange dzamuchangobva akasvinudzwa uye tinya pamusoro payo
• Sarudza Quote kubva chemabhazi Loss / Take zvakaoma Muterere
• Mumazuva Tora mari yacho, isai zvenyu achida kubhadhara, 1.0725 kwatiri, uye tinya chitoro
Zvino imi regai tinofanira kunetseka pamusoro kunobatsira kuti muripo kugadzirisa kana uine maawa club machati dzenyu. Unenge chinangwa chako mari Danho yave asvika, tengeserana yenyu chido pedyo kwaita, uye mari yaunowana anogona kubvisa ngaatarire iiswe kuti wako wokutengesera nhoroondo.
Stop-Loss ari dzakamirira kuti achishandiswa vatengesi kuderedza ngozi.
Kana ongorora pamusika, Vatengi Anogonawo pombonyedza kuti kunobatsira mutengo rwokufamba chinoparira marwadzo. Kuderedza nhamba yemabhuku zvinogona kurasikirwa, mumwe munyengeri anogona kuisa vamwe mukana mitemo yaibva pamusoro pamusika kuitika.
Izvi zvinokudzivirira une kuratidza machati kuti mazhinji zvikamu nguva uye zvinogona kubvisa pfungwa oudzame ndichireurura anokosha zvokutengeserana sarudzo. A kudzivirira-Loss kuti inokupai iwe kusiya chidzitiro wako musoro uye murinde firimu pamwe anoziva wako kutyisidzira uwandu iri dzavhara.
Right pano muenzaniso nzira kunharaunda imwe kudzivirira-Loss hurongwa:
• Iwe akavhura EUR / USD kutenga chinja pa 1.0605
• Unofanira kuita upfumi $500 aine multiplier ane zana
• Kuti vanoisa Kukutadzisa-Loss murayiro nemazvo, tora Kutarira chati kuti kunobatsira kuti kupomera kunonyanyisa ano kuderera. kuwana usingashandi muripo.
• Your chichiita-Loss kuti anofanira akaiswa nyore pasi usingashandi mwero, panguva inenge 1.0580
• Kuti pedyo kumisa-Loss kuti mazwi aya, tanga wavhura basa pamwe kunobatsira pashure idzo vanoshanyira zvakaenda My
• Sarudza kuti EUR / USD kutengeserana dzamuchangobva akasvinudzwa uye tinya pamusoro payo
• Sarudza kubva Quote kubva kudzivirira Kurasikirwa / Take zvakaoma Muterere
• Mukati adzivise Loss nezvenyaya, isai zvenyu achida mutengo, 1.0580 kwatiri, uye tinya chitoro
Zvino haufaniri kutya pamusoro kunobatsira kuti mwero kugadzirisa kana uine maawa club machati dzenyu. nengozi Your vakanga dzaona uye vatora kutarisirwa.
Chinokosha Analysis Kutsanangurwa
Zvakaoma mari vari rokutendeutsa kuramba, vari kuchinjwa achibatsirwa weOPEC sarudzo, pakati East Kurwisana, kugadzira boosts muna Iran uye zvakawanda zvakasiyana zvinhu.
Somuenzaniso, ngatitorei mashoko rakabudiswa muna January 2016: Russia uye weOPEC kuderedza Down Crude Oil kugadzira kuti adzivise ari kusimudzira-kure.
On February 16, 2016, zvirokwazvo weOPEC uye Russia akabudirira oma wakaipa kugadzira.
On February 17, zvakaoma mafuta nokuchengeta akasvetukira kubva $32.29 kuti $34.31 (6.tatu%). For rinotevera 20 mazuva, mhosva zvakachengetwa achikura, uye musi March 7, yakasvika $ 40.seventy matanhatu, mumwe kumusoro chezano 26.2%.
Breaking News kusanganisira zviziviso zvinokosha uye zvibvumirano inoratidza roga zuva. zvaibvira anoiona paterevhizheni kana paInternet. Zviitiko zvakadaro mari anogona akazviratidza sezvo kutengesa Alerts; Via kuaverenga, unogona kufungidzira kana mwero achava zvichikwira vaise kana kuwa.
Kuita zvakaenda Via nzira iyi unowanzonzi inokosha Kukoshesa.
A refu kutarisirwa chiitiko, zvakadai pakabudiswa hachizi itsva iPhone, iPad, kana MacBook, unogona chinangwa pamwe nekurutsa refu muzvitoro. chinodikanwa This, mukudzosa, anogona Mukuwedzera ine zvainoita kunoshamisa zvichikwira achapesana mukati vebasa Apple mumatanda.
Izvi zvinopa inoshamisa kuwana mukana upi nokurova munyengeri.
Ngatitorei muenzaniso Somuenzaniso. On September 7, 2016, ari iPhone itsva 7 achinja inopiwa kune voruzhinji.
The wakaenzana chaizvo zuva, Apple mugove akasimuka kubva $107 kuti $ zana nemashanu.
chiitiko ichi change yaisanganisira vose mashoko nezvikumbaridzo, saka tose (Ungangove, kusanganisira iwe) angadai akarangarira nezvazvo.
zvikamu akadaro pamusoro vagadziri dzakakurumbira, zvinhu uye mabasa (Facebook, Microsoft, Google, Tesla, zvichingoenda zvakadaro.) vari kurwisa rimwe zuva, paInternet uye paterevhizheni. Mumwe nomumwe zvinhu izvi ndiyo zvokutengeserana chiratidzo chokuti uri kuita chokutanga zvazvingava zvakaoma.
Zvakaenda achinyanya kwakavakirwa nhau uye panguva anowanzonzi inokosha ongororo, chimwe chezvinhu akakurumbira vachitenga uye kutengesa unyanzvi.
Kuti atore ruzivo vachitenga uye vachitengesa pazviridzwa, anosanganisira kana kutenga kana kuti kutengesa chinokosha, unofanira kuongorora pamusika mari. On kunyaradzwa kwenyu, mitengo iwayo mufanidziro mukati wechinhu machati.
Kana vanofungireiko ane mumhepo tembiricha chati 2 grade pfungwa, ungangopiwa kuona zvikamu vachigere tembiricha zvasimba, i.e. ndikarega payo fluctuated ari rakanaka siyana pakati nemwaka uye kwakawedzera zvikuru muzhizha uye kuderedzwa muchando.
Chii chakaitika mukati mhiri kunyange iratidzike mugumo - pfungwa iyi sezvo kushandiswawo kutonhora sezvazvakaita kuna zvoupfumi misika. Kuti chaizvoizvo musimboti unyanzvi Kukoshesa.
Chirega kuti kutora chimwe chezvinhu mukurumbira Tech wakatarwa giya, rutsigiro uye Nemishonga, somuenzaniso.
Kana mutengo vanokwira uye pakarepo kudzokera nzira, sokunge kurova rusvingo, inguva kusimudzira.
Kana mwero rinowira uye ipapo zvose kamwechete gwa kukwira, sebhora gwa kumusoro kure pasi, zviri yakanaka chiratidzo kudzokera refu.
kushandiswa yedu wokutengesera kuchikuva, unogona vanofungireiko mamwe miganhu chati rova ​​pamusoro reversals, kana kushandisa zviratidzo kuti ndikupei mutenge kusimudzira anonongedzera.
Kushandura zvakanaka uye vakachengetwa, kungotevera izvi nhungamiro matatu Golden!
Nguva vanoshandisa fashoni vachitenga uye kutengesa. kufungawo kutaurwa: The fashoni ndiyo shamwari yako! kana muchiona muripo iri nyore kufamba zvakanaka kosi, kuchinjanisa saizvozvi. Zviri Zvinowanzova nyore kumhanya nemhepo!
Rega mari yenyu ikure, kunyange sezvo proscribing kurasikirwa kwako. mari yenyu vanofanira pfuura kurasikirwa kwako, ndicho kuti nyore! zviri kure zvakafanana mune chaikoiko: wana mamwe, shandisa ndoda. Your kutyisidzira / rumbidzo reshiyo vanofanira kuva 1:2... kana kupfuura!
kodzero pano Ndiyo 1/3 mutemo: Unodzora mari yako. paunenge kutotanga kushandura, shandisa mari yakawanda uye multipliers, saka murege kuisa kupfuura 2% Nhoroondo dzako wakatsiga. saizvozvi, chinhu kundikana chinjana chingava isingadhuri kupfuura bhazi mutengo tikiti.
In kunyaradzwa kwenyu, taona vakashanduka Dealer Tracker, munhu zvinowanikwa zvikuru kuti akubatsire kuramba mirau iyi vachigere uri kuita kwako matanho okutanga ari muzvinashawo.
Enda pane kuona mirayiridzo yedu kuwana nzira kuchinjanisa kutevera mitemo avo!
To kuchinjanisa zvinobudirira, uchida uongorore misika kwazvo uye sei nokukurumidza kune chenjedzo yavari kutumira nenzira yako. The Libertex Indaneti chinouraya kuchakubatsira pamwe nokukoshesa, SeMwanakomana Libertex sero App anosimbisira musingadi siya chero wokutengesera mukana. Over makumi masere% vabudirire vanoita vanoshandisa nomumwe Libertex Indaneti chinouraya uye Libertex Mobile Anwendung.
Edza kufungidzira zvakazosunungurwa hunowanika: iwe kumhanya kwako musika kuongorora mukati Libertex mambure chinouraya zvakanaka uye kutsunga kuvhura basa, asi zvino definately waifanira kuenda tafura yako uye vakapiwa dzabatwa vashanyi Jam, kana zvichida iwe akaenda kunyatsotarira kufirimu kana akaenda kunoona pal. Nokushandisa kushandisa Libertex cellular Anwendung unogona nokukurumidza sei zvose zvazvingava inofamba panguva iyoyo se kuva refu nzira kure kubva pakombiyuta yako, i.e. unogona chinjana panguva vanoenda, nguva yose yose, kwose kwose. Tiine Libertex Mobile Anwendung, unogona aongorore akazaruka zvinzvimbo, uyewo akazaruka zvakaenda itsva uye kuongorora zvinokonzerwa enyu nguva chaiyo. Ndizvo zvakananga kubatsira apo zvinonyatsorehwa pamusika mamiriro ezvinhu matonatswa kwamuri.
Paunenge uchida kupedza nguva ongororo, kuita pazviridzwa anokosha, ari Libertex mambure chinouraya munhu here akakwana mhinduro. With ichi vachitenga uye vachitengesa papuratifomu, unofanira vakapiwa zvose zvaunoda mumaoko: twa ratings, zvekushandisa ongororo Ezvemutauro, uye nepakumedura ruzivo. Saizvozvowo, mambure-kwakavakirwa yedu zvachose papuratifomu achibvumira kuti zvinobatsira nzwisiso nyanzvi dzedu 'wongororo uye dzinoenda usati wavhura Exchange.
Download yedu cellular Anwendung thru ari Andriod Market kana kuburikidza AppStore, uye kushandisa kwatinoita padandemutande chikuva Via rwaunofarira Browser.